Umthetho wezindlu | Law & More | I-Eindhoven kunye neAmsterdam
Umthetho wokuthengiswa kwezindlu nomhlaba ubandakanya zonke izinto ezisemthethweni malunga nepropathi engenakushenxiswa. Si- Law & More banokukunceda ngeengcebiso zomthetho xa kuvela imibuzo okanye iimbambano ngokubhekisele ekuthengweni nasekuthengiseni impahla engenakushenxiswa. Ukongeza koku sinokukubonelela ngeengcebiso zomthetho kwimiba yomthetho wolwakhiwo kunye nomthetho werenti.
FUNA UKUQHUTYELWA LOKUTHENGELWA KOMTHETHO KAMNYE?
YIBA KWILINYE LEMITHETHO YEMITHETHO YANGAPHAKATHI
> Ukuthengiswa kwendawo yokuhlala yeshishini
> I-Eigen bedrijf en scheiden
Njengosomashishini okwicandelo lezokwakha intsebenziswano yakho namaqela amaninzi ahlukeneyo. Iinqununu, abaqulunqi bezakhiwo kunye neekontrakthi kufuneka zenze ngokucacileyo ukuqeshwa, kuba imisebenzi yeli qela ngalinye inxulumene ngokusondeleyo. Ngenxa yobuninzi bentsebenzo phakathi kwenkqubo yokwakha, iqela ngalinye libophelelekile kwizibophelelo kunye namalungelo abekwe phantsi komthetho. Ngenxa yobunzima bentsebenzo, zonke iintlobo zemicimbi yezomthetho zinokuvela. Zithini izibophelelo zakho kunye namalungelo kwelinye iqela? Ngubani onokuba noxanduva kwimeko yomonakalo njengesiphumo sesiphoso sakhiwo. Law & More Unakho ukukunika ingcebiso yezomthetho kwaye unokubeka isikhwehlela xa kugqitywe njalo.
Ngapha koko, sinokukucebisa ngayo yonke imigaqo yomthetho ekufuneka ilandelwe lulwakhiwo. Ngale ndlela iingxaki zomthetho, malunga netyala umzekelo, zinokuthintelwa ngangokunokwenzeka.
Ngokufutshane, singakunika, phakathi kwezinye izinto, ngezi zinto zilandelayo:
Ukuqulunqwa kwamalungelo akho kunye nezibophelelo zakho njengomdlali ophakathi kwenkqubo yolwakhiwo;
Cebisa malunga nemigaqo kunye neemeko ekufuneka ulwakhiwo kufuneka zilandelwe;
Uncedo kwimeko yokuba unetyala.
Law & More inceda abaqeshi kunye nabanini bomhlaba ukuthintela nokusombulula iingxaki zomthetho. Abaqeshi kunye nabanini bomhlaba banemisebenzi ekhethekileyo yomthetho. Ezi ziqulathe umlinganiswa olawula oko kuthetha ukuba amaqela angazitshintsha izivumelwano zawo. Ukongeza, kukho izibonelelo ezinyanzelekileyo ngaphakathi komthetho werenti. Umntu akanokwahluka kule mithetho, ophambili azimisele ukukhusela umqeshisi njengoko ililungu elibuthathaka, ngemvumelwano. Ukuba ubekwe kwimeko apho umlingane wakho angahambi ngokwezivumelwano zakhe, kukho amanyathelo aliqela anokuzama. Kwiimeko ezinjalo ungasithemba usibonelela ngengcebiso yezomthetho oyifunayo.
Imizekelo yezifundo esinokukunceda ngayo:
Ukuyilwa kwesivumelwano sokuqeshisa ukuba ungumnini-ndawo ;;
• Iimpikiswano malunga nenkcazo yesivumelwano;
• ukuthatha amanyathelo ukuba umqeshi okanye umnini-ndlu akenzi ngokuhambelana nezivumelwano ezenziwe;
Ukupheliswa kwesivumelwano sokuqeshisa.
Irenti yendawo yokuhlala yeshishini
Ukuba unqwenela ukuqhuba ishishini uyakufuna indawo yeshishini. Xa unenjongo yokuqeshisa ngendawo yokuhlala, kufuneka uyile isivumelwano sokuqeshisa. Kukho imigaqo ethile esemthethweni yokurenta indawo yokuhlala yeshishini. Esinokukunceda ngako kukulandelayo
• chonga iintlobo zesivumelwano sokurenta kunye namalungelo ahambelana nawo.
Ukucebisa kwimeko yokuhlengahlengiswa kwamaxabiso;
Ukucebisa malunga nokukhuselwa kwezokhuseleko.
Ngaba unomdla kwisakhiwo esihle? Kwimeko apho ufuna ukusiqasha esi sakhiwo kubalulekile ukwazi ukuba imisebenzi ojolise kuyo… ukuthobela eyona nto ithethwa ngumasipala ekubhekiswe kuyo kwisakhiwo. Law & More isekulahleni yolwazi lwezicwangciso zokucandwa komhlaba kwaye iyakwazi ukumisela ukuba sikhona na isithuba.
Ukuthengiswa kwendawo yokuhlala yeshishini
Ukuba unqwenela ukuthenga ipropathi yeshishini lakho okanye sele unayo, singakunceda ngezi zifundo zilandelayo:
• uthethathethwano lwesivumelwano sokuthenga;
Ukophulwa kwemvumelwano ngumnini-ndawo;
• iimali mboleko kunye nolwakhiwo lwemali.